छोइला के हो ? कसरी बनाउने (भिडियोसहित)
बाह्रखरी - वर्षा महर्जन सोमबार, फागुन १७, २०७७
काठमाडौं । ‘छोइला’ शब्द सुन्दा मुख नरसाउने सायदै कसैको होला । नेवारी ‘मेनु’मा ‘छोइला’ नभई नहुने तर लेखिरहन पनि नपर्ने परिकार हो । नेवारी समयबजी छोइलाबिना अपूरो हुन्छ भन्दा फरक नपार्ला ।
यसको क्रेज यति धेरै बढिसकेको छ कि पछिल्लो समय, नेवारभन्दा पनि अन्य समुदायका व्यक्तिहरुको मुखबाट यो परिकारको गुनगान धेरै सुन्न पाइन्छ । उनीहरुले नेवारी मेनुमा खोज्ने सबैभन्दा पहिलो परिकार भनेकै छोइला हो ।
यो विशेषगरी बजी अर्थात् चिउराको भरपर्दो साथी हो । अलिअलि पिरो, अलिअलि मसालेदार यो परिकारको स्वाद एकपटक जिब्रोले लिइसकेपछि पटक–पटक लिन पल्किन्छ ।
नेवारी बोलीचालीको ‘छ्वेला’ शब्द समयक्रममा लेखन र बोलाइमा ‘छोइला’ बन्न गएको हो । छोइलाको टिपिकल अर्थ भनेको ‘छुयुः ला’ अर्थात् पोलेको मासु भन्ने हुन्छ । काँचो मासुलाई पोलेर मात्रै तयार गरिने भएकाले यसलाई छोइला भनिएको हो ।
विशेषगरी राँगाको फलमासुलाई लामो–लामो गरी काटेर ‘धुसु’ (फलामको त्रिशूलजस्तो वस्तु, जुन यसैका लागि बनाइएको हुन्छ)मा राखेर पराल बाली १० देखि १५ मिनेटसम्म पोलिन्छ । मासु बाहिर कालो र भित्र अलिअलि रातो हुने गरी पाकेपछि त्यसलाई आगोबाट निकालेर सानो–सानो टुक्रा पारेर काटिन्छ । छोइला काटिरहँदा यो निकै ‘जुसी’ हुन्छ । काटेको छोइलामा रातो खुर्सानी, अदुवा–लसुनको पेस्ट, नुन, थोरै अजिना मोटो, हरियो लसुन, उसिनेको गोलभेडा तथा तोरीको तेलमा मेथी र बेसार फुराएर यी सबै मसला हालेको छोइला मोलिन्छ । पानी नहाली तोरीको तेल मासुमा मज्जाले छिर्ने गरी छोइला मोलिन्छ । अन्तिममा सजावट र स्वादको लागि धनियाँ काटेर माथि राखिन्छ । तयारी छोइलाको मिठो बास्नाले नेवारी खाजाघरमा छोइला अर्डरमा अग्रस्थानमा आउँछ ।
मासु नखानेका लागि छोइलाजस्तै स्वाद
विशेषगरी नेवारी समुदायले राँगाको मासुबाट छोइला परिकारको विकास गरेको हो । तर, यसको स्वाद र लोकप्रियता बढेसँगै मासु खाने तर राँगाको मासु नखानेहरुका लागि पनि भनेर खसी, कुखुरा र हाँसको छोइला पनि बन्न र बनाउन थालिएको छ । हिजोआज नेवारी खाजाघरमा यी थरीथरीको मासुको स्वादमा छोइला सजिलै चाख्न सकिन्छ ।
यसको लोकप्रियता अब यति धेरै बढ्यो कि पछिल्लो समय मासु नखाने व्यक्तिहरुले पनि छोइलाको स्वाद चाख्न थालेका छन् । तर, उनीहरुले खाने छोइला मासुको नभई च्याउ, मस्यौरा आदिको हो ।
हिजोआज सुकेको प्याज, अदुवा, लसुन, खुर्सानीको पेस्ट, नुन र तेल हालेर मोलेपछि त्यसलाई छोइलाको नाम दिइन्छ । तर, के यसलाई छोइला भन्न मिल्छ त ? किनभने, अघि भनिएजस्तै छोइला भनेको पोलेको मासु हो ।
संस्कृतिविद् सुर्बन शाक्य यसलाई पनि छोइला नाम दिन सकिने बताउँछन् । “किन नहुनु ! च्याउको छोइला, मस्यौराको छोइला भन्दा केही फरक पर्दैन । छोइलाजस्तै गरी बनाइने र त्यस्तै स्वाद ल्याउन खोज्ने भएर यसलाई मस्यौराको छोइला भनिएको हो ।”
यसले छोइलाको महत्व अझै बढाएको उनको भनाइ छ । उनी यो शब्द झन् प्रतीकको रूपमा विकास भएको बताउछन् । “चिनी नखानेहरुका लागि सुगर फ्रि सुगर पाइन्छ । चुरोट छुटाउन चुरोटजस्तै स्वाद भएको औषधिहरु दिइन्छ । चिनी होइन । तर, त्यो चिनीजस्तै गुलियो हुन्छ । त्यही काम गर्छ । त्यसैले त त्यसलाई सुगर फ्रि सुगर भनियो,” उनी अझै प्रस्ट्याउँछन्, “चिनीको स्वाद मन पराउने तर चिनी खान नहुनेहरुका लागि पनि त्यो उपलब्ध भयो । त्यस्तै, छोइलाको स्वाद चाख्न चाहने तर मासु नखानेले त्यही मरमसला हालेर त्यही तरिकाले पकाएर त्यसकै स्वादमा चाख्न खोजेको हो । तर, त्यसको सट्टामा मात्रै च्याउ वा मस्यौरा हाल्यो ।” यसरी शब्द सापटी लिँदैमा छोइलाको महत्व नघट्ने अझै यसको लोकप्रियता बढेको उनको विश्वास छ ।
छोइला र समयबजीको कथा
नेवारी समुदायमा ‘समयबजी’ लोकप्रिय परिकार हो । नेवारी सुमदायका पूजा, जात्राहरु हुँदा ‘जा : चिपअ’ अर्थात् भात खान नहुने हुन्छ । शुद्ध भएर खाना नखाई बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी बस्दा पूजा सकिनेबित्तिकै समयबजी खाने चलन छ । समयबजीको शाब्दिक अर्थ समयमा नै खाने परिकार भन्ने बुझिन्छ । समयमा नै खाइने भएकाले यसलाई समयबजी भनिएको शाक्यले जानकारी दिए ।
चिकित्सकीय हिसाबले हेर्ने हो भने खाली पेटमा अरु खानेकुरा खाँदा असर गर्न सक्ने भएकाले समयबजी शरीरलाई नोक्सान नहुने परिकारहरु समेटेर तयार पारिएको हुन्छ । शाक्यका अनुसार समयबजीमा छोइला, बोडी, चिउरा, भटमास, लसुन, अदुवा र साँग गरी पाँच परिकार मात्रै हुन्छ ।
बोडी, भटमास, मासुले शरीरमा प्रोटिन प्रदान गर्छ । सागले शरीरमा भिटामिन प्रदान गर्छ । साथै, आगोमा पोलेको तातो छोइलालाई चिसो सागले सन्तुलन गर्ने शाक्यले बताए । यस्तै, लसुन र अदुवालाई खाएको खानेकुरा सन्तुलन गर्ने परिकारको रूपमा लिइने उनले बताए ।
समयबजीमा पकाएको मासु नराखी छोइला र यी अन्य परिकारहरु राख्नुको अर्को कारण समयको बचत पनि भएको शाक्य बताउँछन् । अन्य परिकार तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले पनि धेरैबेरसम्म भोको बस्न नपरोस् भनेर यी परिकार राखिएको उनको भनाइ छ ।
तर, पछिल्लो समय समयबजीको नाममा विभिन्न थरी समेटेर मान्छेले आफ्नो स्वादअनुसार यसलाई परिष्कृत गर्दै ल्याएको देख्न सकिन्छ । भोजमा धेरै परिकार समेटिन्छ । यो चलनले संस्कृतिलाई फैलाउँदै लग्नुभन्दा विकृतितर्फ मोडेको उनी गुनासो गर्छन् ।
“संस्कृतिले धनी–गरिब भनेर छुट्ट्याउँदैन । तर, समयसँगै मानिसले चलनचल्तीमा आएकोभन्दा धेरै परिकार थपेर जसरी समयबजीलगायत अन्य नेवारी परिकारलाई परिष्कृत गर्दै लगेको छ, त्यसले गर्दा आर्थिक पाटो कमजोर हुनेहरुका लागि सम्भव हुँदैन,” उनी भन्छन्, “जसले गर्दा पैसा र समयको खर्च हुन थालेको छ । संस्कृति भनेको सबैलाई एउटै हुनुपर्छ, चाहे पहिरनमा होस् वा परिकारमा । तर, अहिले संस्कृति धनी र गरिबका लागि फरक–फरक हुन थालेको छ, जुन राम्रो होइन ।”
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीनबुँदे निर्देशन जारी गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा... ३ घण्टा पहिले
काठमाडौं । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको ‘भ्यागुता धार्नी’ नपुग्ने जिकिर गरेका... ६ घण्टा पहिले
काठमाडौं । धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को अनुमति माग गर्दै १५ वटा संगठित संस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका... ७ घण्टा पहिले
काठमाडौं । देशका विभिन्न भू–भागमा आज पनि हावाहुरी र मेघ गर्जनसहित चट्याङको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान... ९ घण्टा पहिले
काठमाडौं । ०७७ सालमा १० महिना सिनेमा हल बन्द भए । बाँकी समय ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा खुलेका हलमा जम्मा चारवटा... १० घण्टा पहिले